comments: ဤစာတမ်းသည်အကျဉ်းချုပ်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ထွန်းသစ်စသိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကလေ့လာတွေ့ရှိချက်အချို့ပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Prause et al ။ , 2015 နှင့် Kuhn & Gallinat, 2014 porn ပိုမိုလေ့နှင့်အတူ correlating သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှု: အလားတူတွေ့ရှိချက်သတင်းပို့ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အနိမ့် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုမှအကျဉ်းထိတွေ့တုန့်ပြန်ဦးနှောက်ကို Activation ။ အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်တွင် "အောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘော-အလားအလာ" ၏ EEG တွေ့ရှိချက်ကိုရည်ညွှန်းသည် Prause et al.:
"မတူတာကတော့, ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူတိုးမြှင့်လေ့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြု။ ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျတှငျ, တိုးမြှင့်အချိန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (Kühnနှင့် Gallinat, 2014) အားအနိမ့်လက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်။ အနိမ့်အနှောင်းပိုင်းအပြုသဘော-အလားအလာလှုပ်ရှားမှု ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ကြည့်ရှုသည့်ဘာသာရပ်များတွင်လေ့လာခဲ့သည်။
ဒါဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။ ခေါင်းဆောင်စာရေးဆရာနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကသူမ၏တစ်ခုတည်းသော EEG လေ့လာမှုသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုပြိုကွဲစေသည်ဟုဆိုသည်။ ဤသည် Prause ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကိုငြင်းပယ်ရန်အတွက်ဒုတိယသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာ ပထမဦးဆုံးစက္ကူ.
မှတ်ချက်။ ။ Prause et al ။ , 2015 သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံကြောင်းအခြားသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများကသဘောတူသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
Neuropsychopharmacology 41, 385-386 (ဇန်နဝါရီလ 2016) | နှစ်: 10.1038 / npp.2015.300
သုတေသနဂိတ်အပေါ်အပြည့်အဝဝေဖန်ဖို့ Link ကို
Shane W Kraus 1, 2, Valerie Voon3နှင့်မာ့ခ် N ကို Potenza 2, 4
1 VISN 1 စိတ်ရောဂါသုတေသနပညာရေးနှင့်လက်တွေ့စင်တာများ, VA သို့ Connecticut ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်, အနောက် Heaven, CT, USA သို့; စိတ်ရောဂါကုသမှု၏2ဦးစီးဌာန, ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, USA,
စိတ်ရောဂါကုသမှု, ကင်းဘရစ်, ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်၏တက္ကသိုလ်3ဦးစီးဌာန,
Neurobiology ၏4ဦးစီးဌာန, ကလေးလေ့လာမြစင်တာနှင့် CASA ကိုလံဘီယာ, ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, USA
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) တဏှာ, Impulse, လုပ်ငန်းခွင် / လူမှုရေးချွတ်ယွင်းခြင်း, စိတ်ရောဂါ comorbidity ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ CSB ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့အထီးကြီးစိုးအတူ 3-6% ဝန်းကျင်ခန့်မှန်းထားသည်။ DSM-5 အတွက်မပါဝင်ပေမယ့်, CSB တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ် ICD-10 အတွက်ရောဂါနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ (တစ်ခုထကြွလွယ်သော-compulsive ရောဂါ, hypersexual ရောဂါ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုစွဲ, ဒါမှမဟုတ်စံတန်ဖိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်သည်အတိုင်း, ဥပမာ) CSB ရဲ့ခွဲခြားအကြောင်းကိုတည်ရှိ။
ပဏာမသက်သေအထောက်အထား dopamine CSB အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD), dopamine အစားထိုးကုထုံး (Levo-dopa, dopamine agonists) တွင် CSB နှင့်အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန် (Weintraub et al, 2010) နဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။ naltrexone သုံးပြီးဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုအသေးအရေအတွက်က CSB လျှော့ချအတွက် mesolimbic dopamine function ကိုရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ opioidergic ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူတသမတ်တည်း, CSB (Raymond et al, 2010) နဲ့ဆက်စပ်ရမ္မက်နှင့်အပြုအမူကိုလျှော့ချမှာ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်။ လောလောဆယ်ပိုကြီးတဲ့, လုံလောက်စွာ powered, neurochemical စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုထပ်မံ CSB နားလည်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကိုဆက်စပ်။ Non-CSB ယောက်ျား vs CSB အဆိုပါ anterior cingulate, ventral striatum နှင့် amygdala (Voon et al, 2014) ၏ သာ. ကြီးမြတ်လိင်-cuerelated activation ရှိခဲ့ပါတယ်။ CSB ဘာသာရပ်များ, cue-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ဤကွန်ယက်၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်အရှင်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်တွေ့ရှိချက် (Voon et al, 2014) နဲ့ resonating ။ CSB ယောက်ျားနောက်ထပ်စွဲလမ်း (Mechelmans et al, 2014) ၌ကဲ့သို့အစောပိုင်းအာရုံကို Orient တုံ့ပြန်မှု implicating, ညစ်ညမ်းတွေကိုမှပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကိုပြသ။ Non-CSB PD လူနာ vs CSB များတွင်ညစ်ညမ်းတွေကိုထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (Politis et al, 2013) အားလည်းချိတ်ဆက်, ထို ventral striatum, cingulate နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် activation တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအသေးပျံ့နှံ့-tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှု Non-CSB ယောက်ျား (Miner et al, 2009) vs CSB အတွက် prefrontal မူမမှန် implicates ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများ၏လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္suggestကိုဖော်ပြသည်။ ကျန်းမာသောအမျိုးသားများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းတွင်အချိန်ပိုများသည်ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းပစိတ်ကြွလှုပ်ရှားမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Kühn and Gallinat, 2014) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နိမ့်ကျသောအပြုသဘောဆောင်သော - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, ခြားနားနေစဉ်တွင်, သဟဇာတမရှိကြပေ။ ဗီဒီယိုအားတွေကိုမှဆွေမျိုးတွေကိုမြင်ယောင်ရန်လေ့အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ပိုပြီးပြင်းထန် / ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ CSB ဘာသာရပ်များ cue reactivity ကိုပိုမိုကြပေမည်, သော်လည်း။
မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများ CSB အချို့ဖြစ်နိုင်သော neurobiological ယန္တရားများအကြံပြုကြပေမယ့်အဲဒီရလဒ်တွေကိုအတိုင်းအတာများကန့်သတ် (ဒါပေါ်မှာဥပမာသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစား Cross-Section ဒီဇိုင်းများ, တစ်ခုတည်းကိုသာအထီးဘာသာရပ်များနှင့်) ပေးထားစမ်းသဘောအဖြစ်ကုသရပါမည်။ သုတေသနအတွက်လက်ရှိကွာဟချက် CSB အကောင်းဆုံးတစ်ခုစွဲအဖြစ်သို့မဟုတ်မစဉ်းစားသည်ရှိမရှိပြတ်သားပြဌာန်းခွင့်ရှုပ်ထွေးတည်ရှိ။ အပိုဆောင်းသုတေသန CSB များအတွက်ကုသမှုရလဒ်များတူသောသက်ဆိုင်ရာအစီအမံ clinically ဆက်စပ်ပုံကို neurobiological features တွေနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦး '' အမူအကျင့်စွဲ '' အဖြစ် CSB ခွဲခြားမူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုအလို ရှိ. , သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်, သုတေသနင်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏။ CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီပေးထား, စှဲများအတွက်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်အရှင်တိုက်ရိုက်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်လိမ့်မည်။
Kühn S က, Gallinat J ကို (2014) ။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 827-834 ။
Mechelmans DJ သမား, Irvine M က, BANCA P ကို, Porter L ကို, Mitchell က S နဲ့, မှဲ့တီဘီ et al (2014) ။ နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ PloS One ကို 9: e105476 ။
မိုင်းလုပ်သား MH, Raymond N ကို, Mueller BA, လွိုက် M က, Lim က KO (2009) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 174: 146-151 ။
Politis M က, ချေးငွေများကို C, Wu K ကို O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, Woodhead Z ကို, Kiferle L ကို et al (2013) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် 136: 400-411 ။
ရေမွန် NC, Grant က je, Coleman အီး (2010) ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်ဆံဖို့ naltrexone နှင့်အတူတိုးပွား: တစ်ကိစ္စတွင်စီးရီး။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 22: 55-62 ။
Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S ကို et al (2014) ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PloS One ကို 9: e102419 ။
Weintraub: D, Koester J ကို, Potenza MN, Siderowf အေဒီ, Stacy M က, Voon V ကို et al (2010) ။ ပါကင်ရောဂါအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: 3090 လူနာ cross-section လေ့လာမှု။ Arch Neurol 67: 589-595 ။ Neuropsychopharmacology ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ (2016) 41, 385-386; Doi: 10.1038 / npp.2015.300